I-China i-Small Small Top Shower Head Venzi kunye nababoneleli-i-Huanyu Sanitary Ware
Ikhaya > Iimveliso > Intloko yeshawari > Intloko yeshawari encinci ePhezulu
Intloko yeshawari encinci ePhezulu Abavelisi
I-Ningbo Huanyu Sanitary Ware Limited, umenzi ophezulu ochwephesha kunye nomthengisi ngaphandle e-China kwaye ube kumgca weplastiki ngaphezu kweminyaka engama-20 kunye neshishini lempahla yococeko iminyaka engaphezu kwe-10, Kwakhona. siye saqinisekisa ngenkqubo yokulawula umgangatho ye-ISO 9002S ekuqaleni kuka-1999. sivelisa zonke iimveliso zayo eTshayina. Iimveliso zethu imigca yempahla yococeko ibandakanya oku kulandelayo: Intloko yeshawari, Intloko yeshawari encinci, Ishawari yesandla, iiseti zikaloliwe zesilayidi, izibambi zeshawa, ithumbu leshawa, iseti yeshawa, isibiyeli sodonga lweshawa, izincedisi zeshawa, iShower Bidet, Ishawa & nezixhobo zokuhlambela ngokunjalo norhwebo. kunye nezinye iimveliso zococeko kwi Made in China Website.
Intloko yeShower encinci encinci yimveliso enobungakanani obuncinci kuneshawari yemvula. Indlela yokusetyenziswa kunye nohlobo lokusetyenziswa ziyafana. Sineendlela ezahlukeneyo zesikwere kunye nezingqukuva. Kukho iindlela zokuphuma kwamanzi ezisebenzayo, ezintathu kunye nesihlanu. Imathiriyeli yethu ekrwada zonke ziyiplastiki entsha ye-ABS, unyango lwe-chrome-plated surface. Intloko yeshawari encinci idume kakhulu eIndiya, eMexico, eItali nakwamanye amazwe.
Sinegunya elinamandla lokuphuhlisa uluhlu olubanzi lweemveliso ezintsha ngokobukhulu obahlukeneyo kunye neenkcukacha kubathengi bethu abadala ukhetho olwahlukileyo kwiimfuno ezahlukeneyo. Umgangatho ophezulu weNtloko ye-Small Top Shower iqinisekiswa ngobuchwepheshe obuphezulu, izixhobo zanamhlanje, kunye nokulawula umgangatho kwinqanaba ngalinye lemveliso. Ngombono wethu wolawulo kunye nokukhula okuqhubekayo, iimveliso zithengiswa kakuhle kwimarike yehlabathi, eye yazuza udumo oluhle kakhulu. Ishishini lethu ligxile kwi-R&D, iOEM, iODM.
Round Single Isitshizi Esincinci Intloko yeshawari ephezulu
Umjikelo wokutshiza omnye omncinci ongaphezulu kwentloko yeshawari yintloko yeshawari ebhityileyo engqukuva, eyenziwe ngeplastiki entsha ye-ABS, kwaye unyango lomphezulu lufakwe nge-chrome. Amanzi mahle kakhulu kwaye amava mahle kakhulu.
Umsebenzi omnye Round Omncinci Intloko yeshawari ePhezulu
Umsebenzi omnye ojikelezayo omncinci wentloko yeshawari ephezulu, intloko yeshawari yesimbo esincinci, uhlobo olunoqoqosho, olwenziwe ngeplastiki entsha ye-ABS, unyango lwe-chrome-plated surface.
IiJet Abs zePlastiki eziNcinci eziNcinci zentloko yeshawari ephezulu
I-jet emihlanu yeplastiki ye-ABS yeplastiki encinci yentloko yeshawari ephezulu, iphaneli enemilo yamaza ineemfuno zoyilo eziphezulu kakhulu, kwaye imingxuma enkulu kunye nencinci yokukhupha amanzi isasazwa kwipaneli.Wamkelekile ukuba uthenge i-Three Jet Abs Plastic Small Top Shower Head evela kuthi.
Intloko yeshawari encinci eKhanyisiweyo
Indlela yokuphuma kwamanzi ye-Multifunctional chrome-plated encinci yentloko yeshawari encinci ikhethekileyo kakhulu, kwaye ukuhanjiswa kwemingxuma yokuphuma kwamanzi kuhluke kwezinye izitayile zeentloko ezincinci zeshawa eziphezulu.Wamkelekile ukuthenga i-Illuminated Small Top Shower Head evela kuthi.
Thenga iimveliso kumzi-mveliso wethu obizwa ngokuba yi-Huanyu Sanitary Ware yenye yezona zinto ziphambili Intloko yeshawari encinci ePhezulu zabavelisi kunye nababoneleli eTshayina. Umgangatho wethu oPhezulu Intloko yeshawari encinci ePhezulu uthandwa ngabantu abafuna ukufumana izinto zorhwebo eziphantsi. Sinemveliso ezininzi kakhulu zokubonelela ngenkonzo yehoseyile. Unokuqiniseka ukuba uthenge ixabiso eliphantsi kumzi-mveliso wethu.